February 2015 - DVB Multimedia Group
· by DVBDadmin · 28 Feb, 2015
DVB Debate Highlights: China – Burma Relation
DVB Debate’s editorial staff has selected the most interesting and newsworthy quotes of the debate about the relation with China, that will be aired on Sunday evening 7:15pm on DVB TV. For free PDF...
· by DVBDadmin · 27 Feb, 2015
China <--> Burma: Facts & Figures
Get prepared for the next DVB Debate about ‘how troubled the relation between China and Burma is?’. In this one-pager you’ll find all the main facts & figures to put it into context. For...
· by DVBDadmin · 25 Feb, 2015
Next on DVB Debate: China-Myanmar Relation
တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာ အစပိုင်းမှာပြေလည်မှုမရှိဘဲ အထိအခိုက် အပွတ်အရှတွေနဲ့သာ ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ ပထမမြန်မာနိုင်ငံတော် ပုဂံကို တရုတ်တို့ ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်လာခဲ့တဲ့ အချိ်န်ကစပြီး ၁၉၈၈ လောက်အထိ တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက် ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးကို မတည်ဆောက်နိုင် ခဲ့ကြပါဘူး။ ၀န်ကြီးချုပ်ဦးနု လက်ထက်မှာ တရုတ်ဖြူတပ်တွေရဲ့ ကျူးကျော်မှုခံခဲ့ရပြီး နယ်စပ်မြို့သုံးမြို့ကို တရုတ်နိုင်ငံ ကိုလွှဲပေးခဲ့ရပါတယ်။ ဦးနေ၀င်းလက်ထက်မှာလည်း တရုတ်-မြန်မာ အရေးခင်းဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက် နယ်စပ်ဒေသ တစ်လျှောက် ကိုးကန့် ၊ ၀ ၊ ကချင်ဒေသတွေမှာ...
· by DVBDadmin · 21 Feb, 2015
DVB Debate Highlights: Returning Experts
The most newsworthy quotes of the most recent debate about ‘Where do Returning Experts end up?’. Media professionals are welcome to use these quotes, cartoon and pictures for own publication, as long as it...
· by DVBDadmin · 20 Feb, 2015
Repatriation: Facts & Figures
Get ready for the next DVB Debate on ‘repatriation’ and read the 1-pager with carefully researched and selected facts & figures on this topic. For PDF download, please click this link and scroll down...